Guddiga doorashooyinka oo la kulmay Ururada Bulshada Rayidka – STAR FM SOMALIA
Guddiga Hirgelinta doorashooyinka Dadban ee Heer Federaal (GFHDD) ayaa shalay Muqdisho kula kulmay xubnaha Ururada bulshada rayidka, iyagoo kala hadlay arrimaha doorashooyinka, iyo sidii bulshada rayidka ay qeyb uga noqon lahaayeen.
Guddoonka Guddiga hirgelinta doorashooyinka ayaa sharaxaad ka bixiyay Hannaanka Doorashooyinka 2016, gaar ahaan doorka Guddiyada heer Federaal iyo heer Gobol, kaalinta Madax-Dhaqameedyada, Ergada doorashada, Musharaxiinta (labada aqal) iyo sharuudaha dhammaantood looga baahan yahay.
Xubnihii ka socday Guddiga doorashooyinka ayaa ka codsaday ururada bulshada rayidka inay door weyn ka qaataan doorashooyinka 2016 ee ka dhici doona magaalo-madaxyada Dowlad- Goboleedyada, Caasimadda Muqdisho iyo xarumaha dowlad-goboleedyada dhismi doona; maadaama Ururada Bulshada ay kaalin muhiim ah kaga jiraan mujtamaca Soomaaliyeed.
Ururada Bulshada rayidka iyo xubnaha Guddiga ayaa sidoo kale is weydaarsaday macluumaad badan oo la xiriira arrimaha doorashooyinka waxay isla garteen in la xoojiyo wada shaqaynta lana sii wado xog-iswaydarsiga labada dhinac.
Bisha soo socota ayaa la filayaa in la bilaabo xareynta ergada soo dooraneysa Xildhibaanada, iyadoo tababaro loo furi doono Odayaasha dhaqanka ee 135 ka kooban iyo Guddiyada doorashooyinka maamul goboleedyada.
Puntland oo soo bandhigtay Xubno Daacish iyo Shabaab ka tirsan oo ciidamada ay qabteen (SAWIRRO)